Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ciao! Uhlela indawo oya kuyo impilo yakho yonke e-Italy! Kuyinto lapho kwazalelwa khona ekuvuselelweni futhi idolobha ukuthi izithembiso elate futhi usinga ngenxa yemisebenzi yayo yobuciko, izakhiwo, nothando lwayo oluphathelene nokudla. I-Italy yikhaya langempela…
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi I-covid-19. Yikho konke esingathi sikwazi ukukhuluma ngakho, futhi ngesizathu esihle. Lokhu igciwane uye balawulwa emhlabeni futhi washintsha ngokuphelele indlela esicabanga ngayo ekuphileni kwansuku zonke futhi yebo zemininingwane Izikhangibavakashi. Ukuhamba ngezitimela kuyindlela yokuhamba eminingi…
5 Amatiyetha Adumile EYurophu